Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo si adag uga hadlay Arinta Berbera – Daily Som
Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo si adag uga hadlay Arinta Berbera
By Staff on March 6, 2018 No Comment
Mudane ka tirsan Baarlamaanka Fedaraalka ah ee Soomaaliya ayaa si caro leh uga hor yimid qorshaha Dowladaha Itoobiya iyo Imaaraatka ee ku aadan Dekada Magaalada Baebara, iyo hadalka Xnafta leh ee ka soo yeeray shirkada DP World.
Magaalada Abuu dhabi ee dalka UAE ayaa waxaa lagu kala saxiixday heshiis ku saabsan Dekadsa Berbera oo ay saami ahaan ukala qaybsadeen DP world 51% halka Somaliland oo laga siiyay 30 % iyada oo ay dowlada Itoobiya laga saayay Saami dhan 19%.
tan iyo wixi ka dambeeyay heshiiskaas waxaa gayiga Soomaalida qabsaday hadal haynteeda iyo si baahsan ee loo boobayo khayraadka dalka, dadka sida carado leh uga hadlay waxaa ka mid ahaa xildhibaan sakariye maxamuud cabi oo horay uga tirsanaa musharxiintii laga guulaysatay.
Xildhibaanka ayaana tilmaamay in Dowladaha Imaraatka iyo itoobiya ay soo qaadeen dagaal lagu dhaawacayo qaranimada iyo midnimada Jamhuuriyada Soomaaliya, waxa uuna bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in loo midoobo.
Xildhibaanka ayaa usoo jeediyay Xukuumada Farmaajo in ay uyeerto Safiirka Imaaraatka ee muqdisho ufadhiyo si wax looga waydiiyo Mashaqada ka taagan Magaalada ber bera ee ay masuulka ka tahay.
Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo si adag uga hadlay Arinta Berbera added by Staff on March 6, 2018